कालो eyebrows र कालो कपाल: यसलाई परिवर्तन गर्न सम्भव छ
महिला प्रकृति छ: तपाईं सधैं प्रकृति दिएको छैन भन्ने कुरा छ चाहन्छु। घुम्रेको कपाल - सीधा, सोझो - दोब्र्याइएको, प्रकाश darkens र कालो - अप हल्का। को मालिक स्लाव भाषाहरु उपस्थिति, एक प्लेटिनम गोरा हल्का वा जलिरहेको कालो आफ्नो बाल को रंग गर्न: खैरो कपाल र हल्का आँखा आफ्नो नजर धोखेबाज र जीवंत बनाउन केहि गर्न इच्छुक छन्। Eyebrows प्राकृतिक रंग पनि गहिरो नीलो repaint गर्छन। र, पनि उज्यालो श्यामला उपस्थिति को आफ्नो प्राकृतिक प्रकार परिवर्तन गर्न सपना कि जो सोचेको थियो?
परिवर्तन गर्न इच्छा पुरातन समयका देखि गएको छ। प्राचीन ग्रीस र रोममा, सबै सम्भव तरिकाले काग कपाल को मालिक खैरो कपाल रूपमा आफ्नो कपाल राम्ररी गर्दा अनि समृद्धिको साइन छ स्पष्ट। पाठ्यक्रम मा जडीबुटीबाट बनाइएका विभिन्न पाउडर थिए। यस्तो Brightening एजेन्ट को आवेदन तातो घाम मा धेरै घन्टा खर्च थियो पछि, कपाल इच्छित सुनको रंग प्राप्त द्वारा "बाहिर जल" छ। खुसीको कुरा, आज, कालो eyebrows र कालो कपाल repaint गर्न, समुद्र तट मा एक पुरा दिन खर्च गर्न कुनै आवश्यक छैन। आधुनिक सौन्दर्य उद्योग अन्य तरिकामा प्रदान गर्दछ।
के बाल रंग प्राकृतिक श्यामला भेट्नुपर्छ हुनेछ
यसको प्राकृतिक प्रकार परिवर्तन, साधारण अर्थमा आफ्नो इच्छा द्वारा मात्र निर्देशित गर्नुपर्छ, तर पनि। यो एक केटी, कालो eyebrows र कालो कपाल छ प्रक्षालित सेतो तातो कर्ल संग थप सुन्दर बन्न असम्भाव्य छ। नयाँ बाल रंग छनौट गर्दा, यो छाला टोन सुरु गर्न राम्रो छ।
एक उज्ज्वल, लगभग बरतन छाला, कालो आँखा, कालो eyebrows - यो उपस्थिति को एक दुर्लभ, तर धेरै सुन्दर प्रकार छ। के बाल रंग कालो भन्दा अन्य, यस्तो सौन्दर्य दृष्टिकोण सक्नुहुन्छ? निश्चित छाला टोन accentuate गर्न सुन्दर। यसलाई गाढा वा हुन सक्छ मध्यम खैरो, चिसो खैरो वा चिसो संग रातो, कि midtone बैजनी छ। पनि नीलो-कालो वा गहिरो डल्लो भन्टा हेर्न राम्रो हुनेछ। तामा रंग जोगिन। यो काम गर्ने छैनन्, र कालो eyebrows र छाला को टोन लागि सुनौलो कपाल रंग।
अर्को प्रकार Brunettes न्यानो कांस्य अनुहारको रुप रंग छ। आँखाको रंग रक्सी र गाढा हेजेल देखि कालो हुन सक्छ। यस्तो बालिका चाँडै sunbathe, र आफ्नो छाला एक लक्जरी चकलेट रंग बन्नेछ। तसर्थ, बाल म कांस्य र सुनको बिट थप्न चाहनुहुन्छ। सुन्दर सूर्य प्रक्षालित कपाल को छाला प्रभाव, रङ लगाइएको प्रविधी Ombre वा shatush accentuate। पनि उपयुक्त प्रकाश र अँध्यारो चकलेट रंग। छैन सबै भन्दा राम्रो - सुन्दर गोरो र तेज विशेषताहरू।
सुविधाहरू कालो कपाल
प्राकृतिक बाल रंग छ eumelanin र pheomelanin - द्वारा Pigments निर्धारित। गाढा - पहिलो एक उज्ज्वल रंग, दोस्रो छ। संख्या र कपाल सलोनियां र Brunettes फरक आफ्नो अनुपात।
कालो eyebrows र कालो कपाल किनभने दानेदार रोगन संरचना को धेरै गाह्रो स्पष्टीकरण गर्न आफूलाई उधारो छ। तसर्थ, सही गोरा बाल हासिल र राम्रो अवस्थामा राख्न, तपाईंले केही staining प्रक्रियाहरु खर्च गर्न आवश्यक छ।
यो कपाल, तर पनि Brunettes जल प्राकृतिक eyebrows गर्न मात्र होइन लागू हुन्छ। ताले छाया परिवर्तन, यो tsvetotipa मेल खान्छ गर्न भौं रङ्ग समायोजन गर्न आवश्यक छ। तर तंग कालो कपाल र eyebrows staining मा दिन त सजिलो हो। त्यहाँ एक गोप्य, जो एक सानो पछि छ।
प्रतिरोधी वा टिन्टिङ colorants
एक staining को safest तरिका - एक toning टिन्टिङ colorants। तिनीहरूले अमोनिया र हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तर सत्य समावेश, र बाल धेरै लामो छैन मा मान्छौं। परिवर्तन कालो एक उत्पादन जस्तै को मद्दतले बाल सम्भव छैन, तर तिनीहरूलाई हल्का छाया दिन र एकदम व्यावहारिक चमक। mousse वा बाम toning छनौट, रातो वा उज्ज्वल बैजनी, तिनीहरूले प्रकाश, वायुमय किसिमहरु को एक झलक दिन्छ उज्ज्वल रुचाउँछु। यस्तो महोगनी वा चकलेट अन्य रंग उनको कालो कपाल मा बल्लतल्ल सजिलै देखिने हुन।
लागि थप कट्टरपंथी परिवर्तन स्थायी रंजक र Brightening एजेन्ट भेट्नुपर्छ हुनेछ। प्राकृतिक कालो कपाल रंग दुई वा तीन रंग भन्दा हल्का छ बनाउनको लागि, तिनीहरूले टोन को इच्छित गहिराई पूर्व-discolor गर्नुपर्छ, र त्यसपछि चाहेको छाया मा toned।
कालो कपाल लागि सुरक्षित दाग
सकेसम्म कपाल संरचना चोट लाग्नु कि रूपमा सानो सुनिश्चित गर्न उद्देश्य विगतमा केही वर्ष staining लागि फैशन। यस मामला मा, प्रक्रिया को प्रभाव प्राकृतिक र ताजा छवि बनाउन उद्देश्य छ।
यस्तो जोड दिंदै, brondirovanie रूपमा प्रविधी, Ombre shatush र सूर्य-प्रक्षालित को प्रभाव संग बाल को एक हल्का टाउको हासिल गर्न मद्दत, तर एकै समयमा धेरै राम्रो-groomed कपाल। टोन गहिराई नरम tints संग हल्का गोरो glare गर्न नम्र देखि भिन्न हुन सक्छन्। यो चित्रकला मा जरा आफ्नो रंग को बायाँ वा नजिक आमाको Tinted छ। प्रक्षालित ताले उज्यालो चकलेट, कर्मेल वा ashy मा Tinted। रातो, आगोको-रातो, गुलाबी वा नीलो - थप साहसी उज्ज्वल छवि लागि।
कसरी गाढा brows हल्का बनाउन
संयुक्त कालो eyebrows र खैरो कपाल कि? कहिलेकाहीं हो, तर छवि लाइटर र अधिक स्त्री बनाउन, यो राम्रो eyebrows एक सानो हल्का बनाउन छ। ब्राउन, ग्रेफाइट, तामा रंग वा eyebrows लागि मेंहदी शायद eyebrows श्यामला जल सामना। परिणाम एक गरिबी देखिने वा देखिने सबै हुनेछ। तर यो निराशा कुनै कारण छ। धेरै गाढा brows एक विशेष उपकरण हल्का गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा प्रसिद्ध उत्पादनहरु को एक पेशेवर ब्रान्ड ReflectoCil देखि एक प्रस्ट्याउने क्रीम भौं छ। Eyebrows लाइटर र तीन टन हुन्छन्।
तपाईं एक oxidizing एजेन्ट संग रंग को एक बिट मिश्रण र राम्ररी हलचल गर्न आवश्यक छ। को eyebrows को सतह Degrease र thickly केश डाई लागू गरियो। 10 मिनेट पछि, नम कपास प्याड संग धुन। अब, उज्ज्वल भौं कुनै पनि इच्छित रंग लागू गर्न सकिन्छ।
Brunettes लागि भौं रंग
त्यहाँ संयुक्त eyebrows र बाल रंग हुन कसरी धेरै राय छन्। पहिले यो eyebrows, कि टोन वा दुई हल्का कम्तिमा गाढा टोन, आज हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो थियो। त्यसैले के eyebrows कालो पूर्ण फिट बाल छन्?
फैशन फैशन, तर सबै कुरा धेरै व्यक्तिगत छ। प्राकृतिक बलिरहेको श्यामला उनको कपाल खुसी छ र, आफ्नो रंग परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् यो कालो eyebrows र कालो कपाल छोड्न सम्भव छ कि छैन भनेर भने? फेरि यहाँ, हामी छाला साथै टोन सुविधाहरू र eyebrows प्राकृतिक आकार ध्यान।
तिनीहरूले आफ्नो अनुहार बढन भने र उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू जोड छैन कालो eyebrows बरकरार गर्न सकिन्छ। गाढा tanned छाला र कालो कपाल भएकाहरूले, कालो eyebrows धेरै तर ठूलो अनुहार सुविधाहरू छन् र धेरै व्यापक प्राकृतिक फारम न्यानो गाढा खैरो रंग मा अनुज्ञेय थोरै सुधार र रंग छ।
छाला को फीकापन जोड गर्न चाहने "हिम सेतो", तपाईं पनि कालो eyebrows छोड्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं यो उच्चारण गर्न चाहँदैनन् भने, यो एक ग्रेफाइट वा सुन्दर खैरो मा repainted गर्न सकिन्छ।
चित्रित Brunettes कसरी हुन
परिवर्तन को लागि इच्छा आउन र Brunettes चित्रित हुन सक्छ। यहाँ कठिनाइ यहाँ सुरु गर्न सक्छन्। कालो रंग समाप्त संग बारम्बार रंगाई बाल पछि हो जो हटाउनु गर्न सजिलो भएको रोगन, को ठूलो रकम जम्मा। तपाईंको कपाल हल्का बनाउन धेरै विकल्प छन्।
एसिड रिमुभर। यो रंग हटाउन सबैभन्दा कोमल तरिका हो। यस्तो तयारी ब्रान्ड Estel «रंग बन्द» छ। कालो रंग चार पटक बाल तीन आफ्नो टाउको छोयो भने तीव्र स्पष्टीकरण हासिल गर्न सकिन्छ। एक गाढा रंग, तपाईंले केही वर्ष छोडेर गर्नुभयो भने, तपाईं रोगी हुनु हुनेछ र लुगा धुने प्रक्रिया धेरै पटक दोहोर्याउन छौँ।
Alkaline रिमुभर। यो प्रक्रिया राम्रो तपाईं मिश्रण लागूऔषधको अनुपात थाहा र निरन्तर स्पष्टीकरण प्रक्रिया निगरानी आवश्यक छ किनभने, एक मास्टर नाउ देखि गरेको छ।
प्राकृतिक बाल रंग बढ्न। यो लामो छ, तर आफ्नो बाल चोट छैन। प्रक्रिया मा जरा रङ्ग otraschivaniya बाम वा फोम, उदाहरणको लागि, Igora «विशेषज्ञ Mousse» वा Syoss «प्रवर्तक रंग" toned गर्न सकिन्छ।
एक श्यामला हुन राम्रो
यदि तपाईं एक सानो डराएको को छवि पक्कै बीउ परिवर्तन र छर्न लागि प्रक्रियाहरु, यो कुरा छैन। यहाँ एक उपहार जस्ताको तस्तै, जस्तै, कालो कपाल, कालो eyebrows छोड्न केही कारणहरू छन्:
फैशन, शैली र अविश्वसनीय सुन्दर महिला को धेरै प्रतीक श्यामला जल छन्, प्राकृतिक वा छैन: Odri Hepbern, Viven ली, Monika Beluchchi, Salma Hayek, पेनेलोप क्रूज, Dita वन Teese।
Brunettes बनाउन-अप बिना जान सक्नुहुन्छ। कालो फ्लफी परेलाहरु र eyebrows स्पष्ट परिभाषित - जस गोरा र लाइट ब्राउन हरेक बिहान काम छ कि।
तपाईं उज्ज्वल contrasting रंग को लुगा लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ। बालिका उज्ज्वल वेशभूषा मा "नष्ट" उपस्थिति बढी मौन प्रकार हो, र केवल Brunettes पर्याप्त सक्छन् पनि प्रारम्भिक बिहान "लैजाने" एक लाल रंग पोशाक।
जापानी स्याम्पु Tsubaki: समीक्षा, फोटो
सुन्दर plait plait: धेरै spobov
रहस्य र सुन्दर चुल्ठो चुल्ठो कसरी व्यावहारिक सुझावहरू
राम्रो कपाल straighteners के लायक खरीद छन्
रूप परिवर्तनको लागि आफ्नो बाटो - «कपाल को" Inneov घनत्व
को bangs बढ्न राख्न कसरी केही सुझावहरू
रेस्टुरेन्ट "परी कथा", सामारा: समीक्षा
Sharika- आफ्नै हातले "ससेज" बाट शिल्प
आफ्नो खुट्टा मा जोश: कारण, उपचार विधि
भान्सा एउटा सानो भान्सा लागि सेट। सम्भव विकल्पहरू
रूसी बिलियर्ड्स को नियम। रूसी बिलियर्ड्स लागि आकार तालिका
चरण नुस्खा फोटो द्वारा एक कदम: सलाद "को जाडो Fasolka"
अविवाहित जीवन को मुकुट: एकाकीपनको छापा को संकेत
Phraseologism अर्थ "को overshoe मा बस्न": मूल, उदाहरणहरू
GeForce GTX 570 (कार्ड): विवरण, परीक्षण, समीक्षा
कोरल बीच Resort शारजाह4* (संयुक्त अरब एमिरेट्स, शारजाह): फोटो र समीक्षा
बिजुली ग्याँस स्विच: वर्णन, पद
विभिन्न टिभी च्यानल रूस ज्ञात अग्रणी मौसम पूर्वानुमान